Covid-19 Coronavirus Pfizer Vaccine Archives - Harley Street Clinic Fitsaboana manokana any London
Last updated on January 15, 2021 By Clinic Harley Street
Ny vaksinin'ny Coronavirus Vaccine Private Innoculations dia misy amin'ny dokotera sy klinika any amin'ny Harley Street any London miorina amin'ny vaksinin'ny Pfizer.
Ny vaksinin'ny Oxford tsy miankina ihany koa dia nankatoavin'ny mpandrindra UK ary antenaina fa ho vonona tsy ho ela ihany koa ny fanaovana vaksininy manokana.
Manao ahoana ny Pfizer Coronavirus Covid 19 Nomena vaksiny?
Ho tsindrona amin'ny sandry ambony.
Iza no afaka manana ny Coronavirus Covid 19 vaksiny?
Ny vaksiny Covid-19 dia misy amin'ny olona rehetra.
Ahoana no fomba ahazoako ny vaksiny Coronavirus?
Please download and use the contact form to register your interest in the Pfizer Vaccine. Once the vaccine is released, ny dokoteranao Harley Street dia hanararaotra manao vaksiny anao rehefa manatrika ny fandidiana ianao noho ny antony ankapobeny, na amin'ny vaksiny fanao isan-taona.
Azonao atao ny manana azy miaraka amin'ny jab flu raha tianao.
Raha manahy ianao fa mety tsy hahita ny vaksiny Coronavirus, Mifandraisa amin'ny Clinic Harley Street handamina fotoana iray hananganana vaksiny.
Hisy fiatraikany amin'ny lafiny vaksiny Coronavirus tsy miankina ve??
Matetika ny mahazo redness sy tsy mahazo aina amin'ny toerana fanaovana vaksiny, ary koa ny aretin-doha, nefa tsy tokony haharitra mihoatra ny andro vitsivitsy fa ny fiantraikany ratsy. Jereo ny GP anao raha manana vokam-piaramanidina maharitra maharitra andro vitsivitsy ianao, na raha sendra mikorontana tampoka ianao aorian'ny fanananao vaksiny Pfizer Coronavirus Private.
Azoko atao ve ny mahazo ny vaksiny Covid19?
Ny jab Pfizer Covid019 Coronavirus dia misy manokana, fa lafo izany ary amin'ny famatsiana fohy. Andrasana handoa eo amin'ny £ 1000 sy £ 2000.
Afaka manoro hevitra izahay raha azo antoka ny fanananao, fa tsy maintsy mitsidika ny toeram-pitsaboana manokana izahay handamina izany.
Azafady tsindrio ny rohy etsy ambany mba hamenoana ny endrika hanehoanao ny fahaliananao.